राजीनामा दिनुस् राष्ट्रपतिज्यू ! – देशदृष्टि
Posted bymilanbagale July 24, 2021 Posted inUncategorized
२०७२ साल कार्तिक ११ गते बुधबार । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उक्त गरिमामय पदमा पहिलोपटक निर्वाचित हुनुभएको दिन । त्यो दिन म सोलुखुम्बु पुगेको थिएँ । सदरमुकाम सल्लेरीसम्म जहाजमा र त्यसपछि तीनदिने पैदलयात्रा गरेर गुदेल गाविस (हाल महाकुलुङ गाउँपालिका) पुग्नु थियो । पहिलो दिनको बास देउसा गाविसको झरेनीमा भयो । त्यो दिनको डायरीमा यसो लेखेको रहेछु ।
“देउसा गाविसको झरेनी बजारमा रहेको मेरा भ्यू लजमा ९.३० मा हामी बास बस्न पुग्यौं । होटलमा बसेको एकछिनपछि टेलिभिजन हे¥यौं । बिद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको समाचार आईरहेको रहेछ । हामीसंगै यात्रारत बृद्धा टासी लामा शेर्पाले टिभी हेर्दै भन्नुभो— ‘आईमाई पो फस (फस्र्ट) भयो ।’ उहाँको मनछुने कुरो सुनेर हामी खुशी मानेर हाँस्यौं । हो नी । नेपालमा महिला फटाफट फस्र्ट भए । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिसंगै उभिनुभएकी ओनसरी घर्ती (सभामुख) लाई देख्दा टासीको अनुहार खुशीले धपक्क बलेको थियो । आफूजस्तै लागेर हो कि ? हिमाली भेगमा यात्रा गरिरहेको भएर हो कि, मेरो मनले चाहि कताकता हिमालको पोल्टो रित्तै भएकोजस्तो महसुस ग¥यो । यतातिर शौचालयदेखि बिद्यालयसम्म सबै विदेशी सहयोगमा बनेका छन् । नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएजस्तो लाग्ने । टिभीमा पनि हिमाली अनुहारले कुनै पद जितेको पटक्कै देखिंदैन । टासीले चाहि ओनसरीलाई आफूजस्तै सम्झेर मायाले हेरिरहनुभो । नयाँ नेपालको समावेशी चित्रमा अझ केही रंगहरु थप्न त बाकी नै छ । थपिने नै छ । नेपालले राष्ट्रपति पदमा महिलालाई पायो । सभामुख ओनसरी घर्तीले उहाँको जीतको घोषणा गर्नुभो । कति खुशीको कुरा ।”
संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो— ‘मुलुकको हित नै मेरो सर्वोपरी हित हो । मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु ।’ जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध उहाँमा झल्केको थियो । त्यही भएर नै उहाँको पहिलो कार्यकाल विवादमुक्त रह्यो । सो कार्यकालमा राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमामाथी आँच आएको महसुस भएन । उहाँले पूर्वराजालाई समेत आफ्नी छोरीको बिहेमा शीतल निवास निम्त्याउनुभयो । पूर्वराजाले पनि यो निमन्त्रणालाई स्वीकार्नुभयो । यो कदमको प्रसंशा भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फरक विचारलाई खेद्ने ब्यवस्था होइन भन्ने सन्देश दिन उहाँ सफल हुनुभयो । पूर्वराजाले पनि फेरिएको ब्यवस्थालाई सहजै स्वीकार्नुभएको महसुस भयो । २ बर्षे कार्यकाल सकेर विदा हुनुभएको भए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सार्वजनिक छवि असाध्यै सम्मानित हुने थियो । उहाँले दोहोरिने रहर नगर्नुभएको भए उहाँको इतिहास अर्कै लेखिने थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जोरबलमा राष्ट्रपति पदमा दोहोरिनु भएपछि नजाँनिदो गरि गल्ती यात्रा शुरु भयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर जनताको उत्साहसंगै पदीय मर्यादा र गरिमामाथी तातोपानी खन्याउँदै जाने काम शुरु भयो । दोस्रो कार्यकालमा सायद सल्लाहकारपनि गतिला परेनन् कि ? सल्लाहकार गतिला परे भने हरेक गलत कदमको विरोध गर्ने र सच्याउने आँट गर्छन् । शीतलनिवासमा त्यो माहोल नै बनेन जस्तो लाग्छ । जी हजुरीको बोलवाला भएपछि पदको गरिमा छिटै सकिन्छ ।
अलिअलि गर्दै धमिलिएको राष्ट्रपति पदको छवि विगत डेढ बर्षमा पूर्ण रुपमा धूलिसात भएको छ । विगत डेढ बर्षमा राष्ट्रपतिज्यूबाट पदीय मर्यादा र गरिमा विपरित केकस्ता कामहरु भए, त्यसको हिसाब इतिहासले राख्नेछ । एउटा—एउटा घटना सम्झँदै जाने हो भने उहाँ लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको राष्ट्रपति हो र जस्तो महसुस हुन्छ । राष्ट्रको अभिभावक र संविधानको रक्षकको भूमिकामा उहाँ खरो उत्रनुपर्ने, एउटा पार्टीको एउटा गुटको एउटा ब्यक्तिको रक्षाकवचमात्र बन्दै पाईला—पाईलामा संविधान कुल्चिनुभो । उहाँलाई रोक्नसक्ने कोही भएन । न गतिलो सल्लाहकार न गतिलो प्रधानमन्त्री । बालुवाटारजस्तै शीतलनिवासपनि चाटुकारै चाटुकारले भरिएछ रहेछ भन्ने महसुस शीतलनिवासले प्रत्येक पाइलामा गरायो । अब त राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो पदको आयु लम्ब्याउने रहर गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
२ पटकसम्म गरिएको संसद विघटनलाई रकेटको गतिमा सदर, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरको अपमान, अध्यादेश सेकेन्ड—सेकेन्डमा पास, सत्तारुढ दलको किचलो मिलाउने थलो । यतिमात्र सम्झँदा पनि राष्ट्रपति पदको गरिमा सकिएको महसुस हुन्छ । जनताको मनमा नबसेको राष्ट्रपति रित्तो र खोक्रो हुन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपति कुनै दलको कुनै गुटको मनमा मात्र बस्छ भने त्योभन्दा ठूलो बिडम्बना के हुन्छ ? बहुमत अस्वीकार गरी संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमबारे सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट शब्दमा भनिदिएको छ — ‘प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेर बहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दावी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८÷२÷७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाईएन ।’ संविधानको रक्षकको निर्णय संविधान अनुकूल छैन । यही फैसलाले सबैले बुझ्ने गरि भनिदिएको छ— आफ्नो त्रुटि सच्याउनुस् र विदा हुनुस् ।
अदालतको फैसलताबाट राष्ट्रपति चिढिनुभएको देखियो । झर्को मानेझैं गरेर संविधानको धारा नै उल्लेख नगरिएको अस्वभाविक खालको नियुक्ति पत्र शेरबहादुर देउवालाई दिन खोजेर राष्ट्रपतिले सांकेतिक रुपमा सर्वोच्चको कदमको विरोध जनाउनुभयो । उहाँ फेरि चुक्नुभो । आफैंले विघटन गरेको संसद आफैंले पुर्नस्र्थापना गरेको घोषणा गरेको केही दिनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ खुवाउनुभएको थियो । आफू विरुद्ध त्यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्ने ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँमा ‘इरिटेशन’ देखिएको थिएन बरु फुकीढल प्रधानमन्त्रीलाई हेर्दै ‘पीएम स्वास्थ्य कस्तो छ आफ्नो ख्याल राख्नुपर्यो’ भन्नुभएको थियो । समाचारमा सर्वत्र छाएको कुरा थियो यो । चरम निरंकुश, ब्यक्तिबादी, हठी र तानाशाही शैलीले शासन चलाएका ब्यक्तिले समेत यति शिष्टाचार देखाउनुभएको थियो । ठुस्स परेझैं सपथ खुवाउनु, नियुक्ति पत्रमा संविधानको धारालाई कुच्याउनु, सपथपछि बधाई दिने औपचारिकता समेत ननिभाउनुले पनि राष्ट्रपतिले अब पदमा बस्ने हैसियत गुमाईसकेको थप प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगत डेढ बर्षमा माफी गर्न लायक काम पटक्कै गर्नुभएको छैन । सिंगो देशको साझा अभिभावक हुनुपर्ने ब्यक्ति एउटा पार्टीको एउटा गुटको मात्र प्रिय हुनु साह्रै ठूलो बिडम्बना हो । यही बिडम्बना सम्झेर राजीनामा दिनुस् राष्ट्रपतिज्यू । गणतन्त्र अस्ति भर्खर आएको हो । तपाईंलाई महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने आम मत बलियो छ । आम मत बलियो भएपनि संसदभित्रको मत बलियो छैन तर त्यो बहुमतपनि नजुट्ला भन्न सकिंदैन । देशको दोस्रो राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनु तपाईंका लागि मात्र होइन, गणतन्त्रकै लागि लागि पनि अप्रिय हुनेछ । त्यसकारण तपाईंको राजीनामा नै यो उल्झनको सबैभन्दा सुरक्षित अवतरण हो ।
संबैधानिक राष्ट्रपतिको पूजी आम जनताको माया, विश्वास र भरोसा हो । त्यो टुटिसकेपछि अब बाकी १९ महिना पदमा बस्नुको के औचित्य रहन्छ र ? यसपाली राष्ट्रपति कार्यालय नेकपाको हेडक्र्वाटरजस्तो भयो । पार्टीको विवाद मिलाउन भन्दै पुष्पकमल दहाल र केपी ओली शीतलनिवास दौडिएको दौडियै । राष्ट्रपति पदको मर्यादाको लिनुसम्म हुर्मत लिईयो । राष्ट्रपतिले उहाँहरुलाई पार्टीको झगडा बोकेर नआउनुस् भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यस्तो कहाँ हुनु ? आफ्नै हुर्मत लिने खेलमा उहाँ रमाउनुभयो । कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशन चलिरहँदा तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले महाधिवेशनलाई प्रभावमा पार्न शीतलनिवासमा दहीच्यूरा भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । त्यो कदमपनि निन्दनीय थियो । संवैधानिक राष्ट्रपति भएपछि आफ्नो भूतपूर्व दलप्रतिको अनुराग असाध्यै अशोभनीय हो ।
केही महिनाअघि एमाले नेतृ रामकुमारी झाक्रीले राष्ट्रपतिलाई अशिष्ट र अशोभनीय शैलीमा गाली गर्नुभो । उहाँको त्यो वचन दण्डनीय र निन्दनीय थियो । महिलाप्रतिको हिंसा थियो । राष्ट्रपतिको गलत कदमको विरोध गर्नुको अर्थ अशिष्ट शैलीमा गाली गर्नु, हुर्मत लिनु, ब्यक्तिगत जिन्दगीमा हिलो छ्यापेर बदनाम गर्नु किमार्थ होइन । कसैलाई मनपरी गाली गर्नु र हिलो छ्याप्नु वाक स्वतन्त्रता होइन । जुझारु नेतृ झाक्री राजनीतिक विभिन्न खुड्किला उक्लँदै धेरै बर्षपछि राष्ट्रपछि बन्नुभयो भनेपनि त्यो गल्तीले उहाँलाई पछ्याईरहनेछ ।
पार्टीका सक्रिय राजनीति गरिरहेका ब्यक्तिलाई संबैधानिक राष्ट्रपति बनाउने रहर अब नगरेकै राम्रो । राष्ट्रपति पदभन्दा पनि अग्लो सार्वजनिक छवि भएका ब्यक्तिलाई यो पदको शोभा बढाइदिन अनुरोध गर्नुपर्ने पाठ नेपालले सिकेको छ । कुनै दलको अध्यक्ष, महामन्त्री, उपाधक्ष्य वा कुनै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई होइन, केदारभक्त माथेमा, गोविन्द केसी, सुशीला कार्की, सन्दुक रुइतजस्ता सामाजिक पूजी भएका, राष्ट्रिय जीवनका सर्वस्वीकार्य ब्यक्तिलाई आगामी राष्ट्रपतिमा देख्न पाईयोस् । यस्ता ब्यक्ति अरु पनि हुन सक्छन् । केही नामहरु प्रसंगवश लिईएको हो । नाम लिईएका ब्यक्तिमध्ये केदारभक्त माथेमा उमेर र अनुभव दुबै कुराले सबैभन्दा परिपक्व हुनुहुन्छ । अरु ब्यक्तित्वहरु प्छि आउने कार्यकालहरुमा राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्नुहुन्छ।
महाअभियोग झेल्ने हठबाट माथी उठेर जनमन र अदालतको फैसलालाई पढ्दै विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरौं । राजीनामा गर्नुभयो भने राष्ट्रपति भएपछि गर्नुभएको सबैभन्दा राम्रो काम यही हुनेछ ।
(२०७८ साल साउन ५ गते नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)